प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य जटिल,एक महिना सिंगापुरमै बस्ने - Himalayan Kangaroo
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य जटिल,एक महिना सिंगापुरमै बस्ने
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ भाद्र २०७६, आईतवार ०१:०७ |
काठमाडौं । सिंगापुरमा स्वाथ्यउपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलामा बढेको एन्टीबढी झार्न प्लाज्मा फेरेसिस गर्न लागिएको हो । उनलाई दिन बिराएर सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पटक शुक्रबार प्लाज्मा फेरेसिस गरिएको थियो । यही अवस्था रहने हो भने उहाँको सिंगापुर बसाई एक महिनासम्म लम्बिन सक्ने उहाँनिकट चिकित्सकको भनाइ छ ।
चिकित्सकका अनुसार प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाको विरुद्धमा बनेको एन्टिबढी निकाल्ने वा झार्ने प्रक्रियामा प्लाज्मा फेरेसिस विधि प्रयोग गरिन्छ ।
यसरी हुँदैछ उपचार
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्माले भने सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपचार प्रक्रिया थालिएको र उनको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए।
डा. शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित न्यासनल युनिभर्सिटी अस्पताल (एसएलयू) मा उपचार प्रक्रिया थालिएको छ।
शरीरबाट एन्टिबडी हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
‘उहाँको उपचार प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र उहाँ पूर्ण रूपमा सामान्य हुनुहुन्छ,’ शर्माले भने। प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैलाको थप परीक्षण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक उपचार थालिएको डा. शर्माले जानकारी दिए।
मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेले प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रान्सप्लान्ट गरिएको मिर्गाैला बिस्तारै कमजोर भएको बताए।
उनले भने, ‘ट्रान्सप्लान्ट गरिएको किड्नी बिस्तारै कजमोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंगापुर लगिएको हो। त्यसपछि पहिलो चरणको उपचार सुरु भयो। पहिलो चरणमा भएको उपचारबाट प्रधानमन्त्रीमा केही सुधार भयो? कस्तो अवस्था छ? यसबारे जान्न सिंगापुर जानुपरेको हो।’
मिर्गाैला पुनः फेर्न सकिने बताउँदै वरिष्ठ मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेले उपचार विधिबाट प्रधानमन्त्री सामान्य अवस्थमा आउने या पुनः मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भन्ने निर्क्याेल हुने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘उहाँका मुटु, फोक्सोलगायतका अंग स्वस्थ छन्। उहाँको शरीरमा इन्फेक्सन भएको छैन। तसर्थ मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्नुपरे पनि प्रधानमन्त्री सक्षम हुनुहुन्छ। सजिलै प्रत्यारोपण हुन सक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गाैलाले विगतमा ६० प्रतिशत बढी काम गरे पनि अहिले ३० प्रतिशतले काम गर्दै आएको चिकित्सकको भनाइ छ।
Previousसरकारी कर्मचारीलाई सपरिवार घुम्न बजेट
Nextश्रीमतीसँग बस्ने पुडासैनीले ‘गलफ्रेन्ड’ भेट्न छुट्टै कोठा भाडामा लिएको खुलासा
BIG NEWS : अष्ट्रेलियाको डार्विनमा गोली चल्यो, कम्तीमा ४ को मृत्यु
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ११:०६
‘अष्ट्रेलियाको जनसंख्या बढीमा १५ मिलियन मात्र हुनुपर्छ’
२९ असार २०७४, बिहीबार ०५:१८